နေအိမ် IQoption သတင်း & အကြံပေးချက်များ IQOPTION tournaments – how to trade and win prizes
ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ:
အခမဲ့ IQOPTION Tournaments for Traders
အားလုံးကုန်သည်များများအတွက်အခမဲ့အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲမကြာသေးမီကအပေါ်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ကြ IQOPTION ပလက်ဖောင်း။ သူတို့ကိုအဓိကဆုဟာပိုကြီးတဲ့ paid ပြိုင်ပွဲများ၏တဦးတည်းအတွက်အခမဲ့ပါဝင်မှုများအတွက်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ IQOPTION အစကုန်သည်များများအတွက် ပို. ပို. tools တွေကိုပေးပါသည်။
ယခု မှစ. အသုံးပြုသူများစိတ်ခံစားမှုအပြည့်အဝအကွာအဝေးရနိုင်ပြီး, ဖြစ်ကောင်းကနေပြိုင်ပွဲအတွက်သိသာထင်ရှားသောဆုအနိုင်ရ IQOPTION အလကား။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲစတင်ခင်မှာ, ထိပ်ကုန်သည်များကျပန်းမှာရွေးချယ်ထားသည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးသင်တန်းသားများကိုကုန်သွယ်စတင်ပြီးတာနဲ့စာရင်းရှိလူသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအကောင့်ပေါ်တွင်ဟန်ချက်အညီအမိန့်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ပြိုင်ပွဲအချို့စဉ်အတွင်းစုစုပေါင်းဆုရန်ပုံငွေအနိုင်ရ $ 10000 န်းကျင်ကိုလက်ခံရရှိအတူ $ 100,000 ကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်။
ယခင်ဆောင်းပါး တစ်ဦး Affiliate အဖြစ်အလုပ်မှာပိုကောင်းထိရောက်မှု6အကြံပေးချက်များ
နောက်ဆောင်းပါးမှာ IQoption in Bangkok – affiliate world Asia conference